“ပျဉ်ဆွေးများကို စိတ်မချပါနှင့်” ဟုအင်္ဂလိပ်ပြဇာတ်ရေးဆရာ ဝီလျံရှိတ်စပီးယားက ရေးသားခဲ့၏။ သင်သည် သစ်သားတံတားကို မဖြတ်ကူးမီ ယင်း၏ပျဉ်များ ဆွေးနေမနေကို အသေအချာစစ်ဆေးလိုပေမည်။
ရှိတ်စပီးယား၏ အဆိုပါစကားများသည် လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၃,၀၀၀ ခန့်က ရှေးအစ္စရေးဘုရင် ပညာရှိရှောလမုန်၏ စိတ်ခံစားချက်နှင့် တစ်သဘောတည်းဖြစ်၏။ ၎င်းက ဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “ဉာဏ်တိမ်သောသူသည် သူတစ်ပါးပြောသမျှကိုယုံတတ်၏။ ပညာသတိရှိသောသူမူကား မိမိသွားရာလမ်းကို စေ့စေ့ကြည့်ရှုတတ်၏။” (သု. ၁၄:၁၅) မှန်ပါသည်၊ ဉာဏ်တိမ်သောသူသည် သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကြားသမျှကို မျက်စိစုံမှိတ် လက်ခံတတ်ပြီး ခိုင်လုံမှုမရှိသော အကြံပေးစကား သို့မဟုတ် အခြေအမြစ်မရှိသော သွန်သင်ချက်များအပေါ် အမှီပြု၍ ဆုံးဖြတ်ပြုမူတတ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ပျဉ်ဆွေးများအပေါ်နင်းသကဲ့သို့ တလွဲယုံကြည်စိတ်ချမည်ဆိုလျှင် ဘေးတွေ့နိုင်ပေသည်။ ‘ယုံကြည်စိတ်ချထိုက်တဲ့ လမ်းညွှန်မှုရင်းမြစ်တစ်ခုခုများ ရှိပါသလား’ ဟူ၍သင်သိလိုပေမည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ သန်းပေါင်းများစွာသောသူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာဟုခေါ်သည့် ရှေးကျသောစာအုပ်တစ်အုပ်ကို အပြည့်အဝယုံကြည်စိတ်ချကြ၏။ မိမိတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကို လမ်းညွှန်ပေးရန် ယင်းစာအုပ်ကို သူတို့မှီခိုအားထားကြသည်။ သူတို့သည် ယင်း၏အကြံပေးချက်အတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များချကာ ယင်း၏သွန်သင်ချက်များအတိုင်း ပြုမူလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ထိုသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပျဉ်ဆွေးများအပေါ် နင်းနေသူများနှင့် တူပါသလော။ ယင်းမေးခွန်း၏အဖြေသည် သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည့် အကြောင်းကောင်းများရှိပါ၏လောဟူသော နောက်မေးခွန်း၏အဖြေအပေါ် များစွာမူတည်ပါသည်။ ဤအထူးထုတ် နိုးလော့! တွင် အထောက်အထားများကို ဆန်းစစ်ထားပါသည်။
ဤလထုတ်နိုးလော့! သည် ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များ သို့မဟုတ် ရှုမြင်ချက်များကို လက်ခံရန် သင့်အား အတင်းအကျပ်မပြုပါ။ ယင်းအစား သမ္မာကျမ်းစာသည် ယုံကြည်စိတ်ချထိုက်ကြောင်း သန်းပေါင်းများစွာတို့ လက်ခံယုံကြည်ကြသည့် ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများကိုသာ တင်ပြပါသည်။ နောက်ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် သမ္မာကျမ်းစာကို သင် ယုံကြည်စိတ်ချထိုက်မထိုက် ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ဤအကြောင်းအရာကို အပေါ်ယံထက်မက စိတ်ဝင်စားထိုက်၏။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင်ထံမှ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လမ်းညွှန်မှု၏ရင်းမြစ် အမှန်တကယ်ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ယင်းတွင် မည်သို့ဆိုထားကြောင်း သုံးသပ်ကြည့်ခြင်းက သင်နှင့် သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူတို့အတွက် အကျိုးရှိပါလိမ့်မည်။
သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ပတ်သက်၍ ထူးခြားသည့်အချက်အလက်တချို့ကို ဦးစွာဖော်ပြကြစို့။ သမ္မာကျမ်းစာသည် အမှန်ပင် ပြိုင်ဘက်ကင်းသော စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်မှာ ယုံမှားဖွယ်မရှိချေ။